नेपालमा थप १९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी, संक्रमितको संख्या ६०० नाघ्यो — Sanchar Kendra
१सकियो नेकपा हाइकमाण्ड बैठक, के भयो निर्णय ?
२नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउदै ओली सरकार, पहिलो चरणमा क-कसले लगाउन पाउछन ?
३नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी, ओली सहभागी छन् कि छैनन् ?
४कोरोना अस्पतालको आईसीयूबाटै सुनका गहना गायब, ररहस्य थाहा पाएर डाक्टर समेत हैरान
५अमेरिकी गुप्तर प्रमुखले चीनलाई लगाए यस्तो गम्भीर आरोप
६खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हट्यो गाँजा, नेपालको मतदान प्रस्तावको पक्ष कि विपक्षमा ?
७सीमा विवादको कुरा उठाएपछि चीनले नेपाली कांग्रेसलाई लेख्यो यस्तो पत्र, केछ पत्रमा ? हेर्नुहोस पूर्णपाठसहित
८नेकपा हाइकमाण्ड बैठक बस्दै, ओली आउछन कि आउदैनन् ?
९कोरोना महामारीकाबीच मोदीले गरिदिए यस्तो ठुलो घोषणा, भारतभर खुसियाली, विश्व नै दंग
१०एकाबिहानै दुखद खबर- हुम्लामा जिप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु, ७ घाइते
११सकियो नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक, ओली सरकारलाई काउन्टर दिन भए यस्ता निर्णय
१२कोरोनाबाट संक्रमणबाट थप १६ जनाको मृत्यु
नेपालमा थप १९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी, संक्रमितको संख्या ६०० नाघ्यो
काठमाडौँ । नेपालमा आइतबार थप १९ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाका अनुसार बिहीबार १९ जना संंक्रमित थपिएका हुन्।
आज मोरङ १, बारा १, पर्सा ३, रौतहट १, सर्लाही १, रूपन्देही ६, काठमाडौं सोह्रखुट्टेका १, नुवाकोटका १, कपिलवस्तु ३, गुल्मीमा १ जना संक्रमित थपिएका हुन्। यीमध्ये नुवाकोटमा पहिलो पटक कोरोनाको संक्रमण देखिएको हो। अब देशका ७७ मध्ये ४२ जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ।
उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। योसँगै नेपालमा कोरोनाभाइरसका संक्रमितको संख्या ६०३ पुगेको छ। तीमध्ये ८७ जना निको भएका छन् भने तीन जनाको मृत्यु भएको छ।
यस्तै कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वभर ५४ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म एकै दिन १ लाख ३ हजार २१० नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै संक्रमितको संख्या ५४ लाख १ हजार २२२ पुगेको छ ।
विश्वका २१३ मुलुक र २ वटा पानीजहाजमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमितमध्ये २२ लाख ४७ हजार १०९ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । बितेको २४ घण्टामा ४ हजार ३७४ जनाले ज्यान गुमाएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख ४३ हजार ७९९ पुगेको छ ।
२८ लाख १० हजार ३१४ जनाको उपचार भइरहेको छ । उपचारारत मध्ये ५३ हजार ५६२ जनाको अवस्था गम्भीर छ । आइतबार बिहान साढे ६ बजेसम्म कोरोना भाइरसकै संक्रमणबाट युरोपियन मुलुकहरुमा १ लाख ६९ हजार २७५ जनाको मृत्यु भएको छ । १८ लाख ८५ हजार ९०० जना संक्रमित भएकोमा ८ लाख ६३ हजार १४५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
उत्तर अमेरिकी मुलुकहरुमा १ लाख १३ हजार ४६० जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमितको संख्या १८ लाख ५५ हजार १७६ पुगेको छ । त्यसमध्ये ५ लाख ५४ हजार १४१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
यस्तै एसियाली मुलुकहरुमा २७ हजार ६८ जनाको मृत्यु भएको छ । ९ लाख ३६ हजार ३३६ जना संक्रमित भएकोमा ५ लाख ४६ हजार ११८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुमा ३० हजार ५९० जनाको मृत्यु भएको छ । ६ लाख ४ हजार ९०० जना संक्रमित भएकोमा २ लाख ३० हजार ८२७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
अफ्रिकी मुलुकहरुमा ३ हजार २६८ जनाको ज्यान गएको छ भने १ लाख ९ हजार ४७० जना संक्रमित छन् । संक्रमितमध्ये ४४ हजार १७७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । त्यस्तै अष्ट्रेलियासहित ओसिनियाका मुलुकहरुमा १२३ जनाको मृत्यु भएको छ । ८ हजार ७१९ जना संक्रमित भएकोमा ८ हजार ५० जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीले अमेरिकामा ९८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । संक्रमित १६ लाख ६६ हजार ८२८ जनामध्ये ४ लाख ४६ हजार ९१४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।